Khronos yakazivisa OpenCL 3.0 uye izvi ndizvo zvimwe zvinozivikanwa | Linux Vakapindwa muropa
Khronos yakazivisa OpenCL 3.0 uye izvi zvimwe zvinozivikanwa maficha
Khronos Kunetsekana, Iri basa rekusimudzirwa kwezvakataurwa mumhuri yeOverGL, Vulkan uye OpenCL, yakazivisa kupedzisa kwekuvandudzwa kweiyo OpenCL 3.0 zvirevo izvo zvinotsanangura APIs neC mitauro yekuwedzera kuronga multiplatform yakafanana komputa uchishandisa ma-CPU epamusoro, maGPU, FPGAs, DSPs, uye mamwe machipisi akakosha.
Izvi ndizvo inoshandiswa kubva kumakomputa makuru uye maseva egore, kune machipisi izvo zvinogona kuwanikwa pane nharembozha uye tekinoroji yakadzika. Iyo OpenCL standard yakavhurika zvakakwana. Makambani akaita seBMM, NVIDIA, Intel, AMD, Apple, ARM, Electronic Arts, Qualcomm, Texas Instruments, naToshiba vakapinda mubasa iri pamwero.
Padanho razvino retsananguro, chinzvimbo chiri chenguva pfupi, zvinoreva mukana wekunatsiridza zvichibva pane zvakataurwa zvakatumirwa kuburikidza neGitHub. Mushure mokunge zvataurwa zvatariswa, iwo maratidziro achagamuchira chinzvimbo chekupedzisira uye yekupedzisira suite suite ichazoburitswa kuti ione kufambidzana kweanowanikwa maitiro.
OpenCL 3.0 Zvimiro
OpenCL 3.0 API ikozvino inovhara ese ma Open Open vhezheni (1.2, 2.x), pasina kupa yakatarwa yakatarwa yega yega vhezheni. VhuraCL 3.0 inopa kugona kuwedzera mashandiro ekutanga kuburikidza nekubatanidzwa kwezvimwe zvinotsanangurwa, iyo ichagadziriswa nenzira yesarudzo, isina kuvharira monolithic chimiro cheOpenCL 1.2 / 2.X.
Kungoshanda chete kunoenderana neOpenCL 1.2 ndiko kunonzi kunosungirwa uye zvese maficha anopiwa mune zvakatemwa OpenCL 2.x inosarudzwa senge sarudzo. Maitiro aya anozorerutsa kugadzirwa kwehunyanzvi OpenCL 3.0-inoenderana mashandiro uye nekuwedzera huwandu hwezvishandiso panogona kushandiswa OpenCL 3.0.
Semuenzaniso, vagadziri vanogona kushandisa rutsigiro rweOpenCL 3.0 vasingazive iwo maficha eiyo OpenCL 2.x. Kuti uwane maficha emutauro wakasarudzika, OpenCL 3.0 inowedzera bvunzo yemubvunzo system iyo inokutendera kuti uongorore rutsigiro yezvimwe zvinhu zveAPI pamwe nemacros akakosha.
Kubatana pamwe nerondedzero rakaburitswa kare zvinoita kuti zvive nyore kuendesa kunyorera kuOpenCL 3.0. OpenCL 1.2 kunyorera kuchakwanisa kumhanya pane zvishandiso zvinotsigira OpenCL 3.0 pasina shanduko. OpenCL 2.x kunyorera hakuzodiwo kodhi shanduko, asi kana iyo OpenCL 3.0 nharaunda ichipa mashandiro anodikanwa (kuve nechokwadi chekubatika mune ramangwana, zvinokurudzirwa kuti OpenCL 2.x kunyorera kuwedzere mibvunzo yekuyedza kuongorora kuenderana neyakavhurikaCL 2. x mabasa anoshandiswa).
Vagadziri vanogadzira nekushandisa kweOpenCL ivo vachakwanisa kusimudzira zvirinyore zvigadzirwa zvavo kuOpenCL 3.0, kuwedzera chete kukumbira kugadzirisa kwekuvapo kweimwe API mafoni, uye zvishoma nezvishoma kuwedzera kushanda nekufamba kwenguva.
Rondedzero yeOpenCL 3.0 inoenderana ne nharaunda, kuwedzeredzwa uye kutsanangurwa kwe SPIR-V Yese Yakatarisa Yekutarisa, iyo zvakare inoshandisa iyo Vulkan API. Tsigiro yeiyo SPIR-V 1.3 kududzirwa inosanganisirwa muiyo OpenCL 3.0 kernel sechinhu chinosarudzika. Nekushandisa iyo SPIR-V yepakati inomiririra yecompute cores, rutsigiro rwekushanda pamwe neesekisheni yakawedzerwa
Yakawedzerwa rutsigiro rwekuwedzera kuita asynchronous DMA mashandiro, inoenderana neDSP-senge machipisi ane yakananga memory kuwana. Asynchronous DMA inokutendera kuti ushandise DMA transaction kuendesa data pakati penyika nepanzvimbo ndangariro mune asynchronous modhi, yakafanana neyakaitwa kuverenga kana kumwe kuita kwekufambisa data.
Tsananguro yemapurogiramu akafanana ekuwedzera eC akagadziridzwa kuita vhezheni 3.0 uye kuvandudzwa kweyekuvhurwa kwemitauro yeOpenCL C ++ yakagumiswa ichida "C ++ yeOpenCL" chirongwa.
C ++ yeOpenCL ndeye Clang / LLVM yakavakirwa compiler iyo inoshandura iyo C ++ uye OpenCL C kernels kuita yepakati SPIR-V inomiririra kana yakaderera-chikamu mushini kodhi. Kubudikidza neshanduro kuna SPIR-V, kuunganidzwa kweC ++ kunyorera kwakarongeka zvakare uchishandisa raibhurari ye template yeSYCL, iyo inoita kuti zvive nyore kugadzirwa kwemaapplication akafanana.
Kuti ududzire OpenCL kuburikidza neVulkan API, iyo clspv compiler inokurudzirwa, iyo inoshandura iyo OpenCL kernels kuenda kuVulkan SPIR-V maonero uye iyo clvk denderedzwa kubvumira iyo OpenCL API kuti ishande pamusoro peVulkan.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Khronos yakazivisa OpenCL 3.0 uye izvi zvimwe zvinozivikanwa maficha
VLC 3.0.10 inosvika ichivandudza zvishoma zvezvinhu zvese, asi pasina nhau dzakatanhamara
Vhura sosi maraibhurari raibhurari uye mafomati